Deparmantiin mana fayyaa Iowa sababa Covid-19 namni 67 guyyaa har’aa kan du’e yoo ta’u seati 24 darb | KWIT
Oromo News 12.29.2020
Aanan mana barumsa Nebraska hojattooni hagamtu akka akka talaali corona virus fudhachuu barbaadan laalu jira, kanaafu ogeessi fayyaa talaali buusu ni danda’a. hoajattooni mana barumsa warraa ogeeyyi fayyaati aanan talaali corona virus kan fudhatan akka tae himame jira.
Barsiisoni talaali January fi February keesa kan fudhan yootau hojattooni biras akkasuma.
Hojattooni fayyaa Nebraska sababa ayyaana Christmas fi bara haarawatif namni walitti qabamuun case haarawa akka baayatu ta’a jedhame yaadamu jira. Torbaan laman darbe kanniin keessa, lakkoofsi nama qabamuu harka qixxeedhan gad xiqqaata dhufu jira.
Haala qilleensa waning kan kennamee advisories siouxland maaraf maxxansee jira. Akkaata gabaasa haala qilleensati snow ammas galgala Kanaan bu’u itti fuf nimala jedhani jiru, snow inche 3 hanga 7 kan eegame yoo tau, mucucakan qabufi snow kan itti fufuudha.
By Fatiya Adam • Dec 28, 2020
Oromo News 12/28/20
Haalaqilleensaa Tajaajilla Biyyoolessa waligala akka jedhanitti “impactful ykn Dhiibbaa” qilleensi guyyaa kibxata fi galgala isaas akka gara biyyati deemu jirau himan.
Snow jiddu galeessa fi guddaan inche 3 hanga 7 Siouxland akka argachuu maltu himan.
Sababa haala qilleensa amma dhufaajiru kanaaf, communities siouxland dhaaf seeri emergency snow dhaaf akka bahuu dandau himan, kan akka Sioux City, South Sioux, Dakota City, North Sioux, Hinton fi Norfolk, Nebraska kan dabalatuudha.
By Fatiya Adam • Dec 23, 2020
Oromo News 12/23/2020
Blizzard akeekachiisa kennite jiraattota Siouxland dhaaf guyyaa harbaa sababa snow, jajjabaa, bubbee fi qorraa hanga 9pm irrati. National Weather service akka jedhanitti magaalan Sioux City snow inche sadii akka bu’u maluu himan.
Bulchaan Sioux City Mayor Bob Scott seera emergency snow hime jira.
Seerri emergency kunis karaa irrati makiina seera malee dhaabu fi abbaan ufii laalu male kan dhoongudha, eegumsa baradoofi qalama adii fi buleedhan kan kaahameedha.